Brodie's @ Crickhollow - I-Airbnb
Berrick Salome, England, i-United Kingdom
I-Brodie's iyisitediyo esesitayeleni, esizimele sodwa edolobhaneni lasendulo laseBerrick Salome, elisendaweni efanele yokuhlola indawo yasemakhaya eseningizimu ye-Oxfordshire kanye neChilterns, kanye namadolobhana aseThames eHenley, Wallingford nase-Abingdon. Idolobha lasenyuvesi i-Oxford elinazo zonke izindawo ezikhangayo zomlando namasiko liwuhambo lwemizuzu engama-20 kuphela.
I-Brodie inombhede ophindwe kabili onomatilasi begwebu lenkumbulo ebabazekayo, imicamelo ye-hypo-allergenic, nequilt namalineni ekhwalithi. Ifakwe kahle ngengxube yezingcezu zesimanje nezamaphakathi nekhulu, futhi ifika iphelele negumbi lokugezela le-en-suite nekhishi elipendwe ngesandla elinefriji, umshini wokuwasha kanye nezindawo zokupheka ezilula, okuhlanganisa i-induction hob kanye nohhavini ohlangene onegrill ne-microwave. Leli fulethi elishise kakhulu lifakwe i-Flat screen TV (Freeview) nesidlali seDVD, kanye nokukhethwa kwamafilimu, imidlalo yebhodi lezincwadi ezokugcina ujabulile. Ngokungajwayelekile endaweni enjalo yasemakhaya sinoxhumano olushesha kakhulu lwe-broadband (kokubili i-Ethernet ne-Wi-Fi).
Ifulethi lavuselelwa laba sezingeni eliphakeme kakhulu ngoNovemba 2017 futhi linikeza indawo esesitayeleni neyimfihlo kulabo abamaholide noma abasebhizinisini. Esigodini, kunezindawo zokucima ukoma ezimbili zendabuko zaseBrithani ongakhetha kuzo, zombili ezinikeza ukudla okuhle kakhulu futhi ngayinye iwuhambo lwemizuzu eyi-10 kuphela ukusuka kithi. Ngaphakathi kohambo lwemizuzu emi-5 kukhona uhla lwezitolo zasendaweni futhi kungakapheli imizuzu eyi-15, izindawo zokudlela eziningi ezinhle, okuhlanganisa neRaymond Blanc's Le Manoir aux Quat'Saisons.
Isikhathi esiningi omunye wethu uzobe ekhona ukuze amukele izivakashi. Ngemva kwalokho siyajabula ukuhola kulokho okuthandwa yizivakashi zethu. Sifuna ukwenza ukuhlala kwakho kujabulise futhi kujabulise ngangokunokwenzeka futhi kuzosiza nganoma iyiphi indlela esingayenza. Singanikeza izeluleko ngendawo yangakini futhi sinikeze izincomo, kusukela ezindaweni ezihamba phambili zokuthenga, okuhlanganisa i-Bicester Village kanye ne-Westgate Shopping Centre noma izindawo zokudlela, kuye ekukhethweni kohambo noma izindawo ezikhanga izivakashi zendawo njengamakolishi adumile ase-Oxford noma i-Ashmolean Museum. . Ngokulinganayo singaba singabonakali ngangokunokwenzeka uma kukhethwa.
Isikhathi esiningi omunye wethu uzobe ekhona ukuze amukele izivakashi. Ngemva kwalokho siyajabula ukuhola kulokho okuthandwa yizivakashi zethu. Sifuna ukwenza ukuhlala kwakho kujab…
Ukuzingenela nge I-Smart lock, ibhokisi lesikhiye
Hlola ezinye izinketho ezise- Berrick Salome namaphethelo